Natalie Martinez – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Death Race (2008) Unicode Jason Statham ပါဝငျတဲ့ Death Race ပထမဆုံးကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ထောငျတှငျးလူသဆေုံးနိုငျတဲ့ အထိ ဂိမျးထဲကလို ကားပွိုငျမယျ ပီးတော့ Point တှရေောကျရငျ လကျနကျတှရေမယျ အခငျြးခငျြးသတျကမြယျ ဒီလိုဖွဈပကျြနတောကို Live အနနေဲ့ပွသပီး စီးပှားရှာမယျ အဲ့လိုဇာတျလမျးမြိုးပါ. Action နှဈသကျသူတှအေကွိုကျတှမှေ့ာသခြောပါတယျ Zawgyi Jason Statham ပါဝင်တဲ့ Death Race ပထမဆုံးကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထောင်တွင်းလူသေဆုံးနိုင်တဲ့ အထိ ဂိမ်းထဲကလို ကားပြိုင်မယ် ပီးတော့ Point တွေရောက်ရင် လက်နက်တွေရမယ် အချင်းချင်းသတ်ကျမယ် ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတာကို Live အနေနဲ့ပြသပီး စီးပွားရှာမယ် အဲ့လိုဇာတ်လမ်းမျိုးပါ. Action နှစ်သက်သူတွေအကြိုက်တွေ့မှာသေချာပါတယ်
IMDB: 6.4/10 195746 votes
Self/less (2015) Deadpool မင်းသား Ryan Reynolds ရဲ့ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပိုးစိုးပက်စက်ချမ်းသာတဲ့ ဘဲကြီးတစ်ယောက်က ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေမလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆေးပညာရှင်တစ်ယောက်က ဘဲကြီးရဲ့အတွေးတွေ စိတ်တွေ အားလုံးကို ကျန်းမာပြီးငယ်ရွယ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လွှဲပြောင်းပေးပြီးမှ ဒီကောင်လေးရဲ့ အတိတ်ကိုသိသွားတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ကောင်လေးရဲ့အတိတ်ကရော ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို ဆန်းကြယ်စွာကြည့်ရှုရမဲ့ သိပ္ပံဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် Credit Review
IMDB: 6.5/10 80,117 votes
End of Watch (2012) imdb 7.6 အထိရထားပြီး မင်းသား Jake Gyllenhaal ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံစံက ရိုးရိုးကင်မရာနဲ့ ရိုက်ကူးထားသလိုမျိုးဆိုတော့ ခေါင်းနည်းနည်းမူးနိုင်ပါတယ်။ ရဲတွေရဲ့ အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာမို့ မကြည့်ရသေးသူများ ကြည့်ကြည့်ပါအုံး
IMDB: 7.6/10 210,163 votes